musha > Travel Europe > Historic Hotels In Europe And How To Get There
Historic hôtels mu Europe vane kwete isingawanzowanikwi kuona, kunyanya mumaguta makuru ane akapfuma munhoroondo. Paris, London, Rome, Munich, Vienna - zvose Maguta aya vane akanaka munzvimbo kupa. vashanyi uyo kuda chinyakare umbozha kuva nezvinetso kuwana pokugara mu Europe. The chakanakisisa Chikamu nezvazvo kuti unogona kuenda kune vose mumaguta aya nechitima, pamusoro bhajeti. Heano pamusoro Hotels zvenhau shanu muEurope uye sei kuti ikoko nechitima:
1. Tinotanga yedu mazita Historic Hotels pamwe – The Oshimi, Paris
No pamazita pamusoro Hotels risingakanganwiki mu Europe kwaizova kwakakwana pasina Paris. Imwe parera kwayo mutsa indasitiri inomira kunze: The Oshimi. Hotera Anozvirumbidza akapfuma munhoroondo uye dzakaisvonaka mukati kuenda nayo. It rakaumbwa 1898, uye kunyange akanga porusvingo nyaradzo.
The Oshimi akanga sezvingatarisirwa yakakurumbira kusarudza kuti nhengo European munzanga. Vamwe ayo vakokwa vakakurumbira vaiva Duke uye Duchess pamusoro Windsor, Coco Chanel, uye Ernest Hemingway, pakati vamwe. Kana uchida kuongorora ayo fadza nhoroondo, unogona kutora chitima kuParis nevamwe maguta makuru European kufanana London, Rome, Amsterdam, kana kweBrussels.
Belmond Cadogan Hotel muLondon kunoonekwa sechinhu Boutique hotera, asi ane refu uye zvinofadza nhoroondo. Vamwe vangati zvakanga kunyange kunoshamisa nguva, sezvo Oscar Wilde akanga achimirira kusungwa kwake ikoko 1895. The Cadogan ane 64 makamuri uye Edwardian zvinoshamisa chadenga. Chinhu townhouse rinokosha, uye akachengeta yakawanda yakasiyana chimiro apo. Kana ukatora rutsigiro redu rokutanga, unogona nyore kufamba nechitima kubva Paris kuLondon.
3. Albergo Del chitsiko unto Pantheon, Rome
Kana totaura historiallinen Hotels muEurope, Albergo Del bedzi unto Pantheon muRoma anotora keke. Ndicho chimwe chezvinhu mukuru hotelle munyika, rakavakwa 1467! Rooms kuti kurerutsa Pantheon ndiyo yakanakisisa, kupedza pamwe Renaissance-manyorerwo mibhedha uye tuore remakore 17 sezvo kushongedzwa. Hazvina kuwana nani kana kupfuura dzakaitika pane kuti. Chimwe bhonasi ndechokuti vaifamba kuRoma rakanyatsojeka nyore nechitima, kunyanya kubvira mamwe makuru maguta Italian.
The Torbrau akatanga sezvo nzvimbo vafambi vaneta kubva Salzburg kuva rokuzorora uye doro rakanaka. Patova uchishanda anopfuura 500 makore, uye akagamuchira gadziridzo ano ari '90s. The Torbrau ari kufarira kuti mabhizimisi vafambi uye vashanyi vanoda kuva fadza nenhoroondo hotera ruzivo. Kana uri kushanyira Munich nechitima kubva Berlin, Vienna kana mamwe maguta European, unogona kuronga kugara pa Torbrau.
The Grand Hotel Wien aakavaka 1870, uye chete vakapedza pfupi nguva yakawanda ari oga dzokugara. Ndicho mukuru ari "Hotels Ring" vakapoteredza Opera nzvimbo Ringstrasse muVienna. Kana toreva munhoroondo inoenda, hotera akamboona mugove wayo zvose mafaro uye mwoyo. Yaiva colour of Mayerling nyaya iyo hwakaguma zvinosuruvarisa, pamwechete norufu yeAustria Crown Prince Rudolf uye ake anoda, Baroness Marie Vetsera. Kana nyaya ine iwe mate mukanwa, unogona kuwedzera Grand yenyu mazita enhoroondo hotell Europe kunoshanyira. Head kuti Vienna nechitima kubva Munich, aine chemabhazi panguva Salzburg.
MuFrankfurt kuna Vienna Zvitima
Kushanyira Historic Hotels mu Europe nechitima Summary!
Munotsvaka kushanyira dzimwe zvinofadza zvikuru mumahotera risingakanganwiki mu Europe? Ronga rwendo rwenyu kuburikidza mumaguta makuru European uye Bhuku chitima matikiti kuti imi ikoko!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhistoric-hotels-europe%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#hotera #Hotels #Vienna europetravel Munich trainjourney chitima mazano Train Travel travelaustria travelfrance travelgermany travelparis travelrome